Reflexio Typography Chirongwa - Dhizaini magazini
Typography Chirongwa Yekuedza typographic chirongwa chinosanganisa icho chinoratidzwa pagirazi nemapepa mavara akacheka neumwe we axis yayo. Inozoguma modular compositions iyo yakambotora mifananidzo inoratidza 3D mifananidzo. Iyo purojekiti inoshandisa mashiripiti uye ekuona kupesana kubva kune mitauro yedhijitari kuenda kuanalog world. Kuvakwa kwemavara pagirazi kunogadzira zviitiko zvitsva nekufungisisa, izvo zvisiri zvechokwadi kana nhema.
Zita rechirongwa : Reflexio, Vagadziri zita : Estudi Ramon Carreté, Izita remutengi : Estudi Ramon Carreté.
Typography Chirongwa Estudi Ramon Carreté Reflexio